Taorian’ny faharesena teo anatrehan’ny fitsarana dia tazomin’ny Air France hatrany ny titra amin’ireo fiaramanidina nifanolanana hoy ny Filohan’ny Filan-kevi-pitantanana (PCA) Air Madagascar, Atoa Eric Koller. Ilaina ny fanoloana na fividianana fiaramanidina satria hahazo tombony 8 tapitrisa dolara isan-taona i Madagasikara raha araka ny nambaran’ny teknisiana. Olana foana mantsy ny fahasimbana ara-teknika tahaka ny nahazo ny tao amin’ny Tsaradia izay niteraka fahatarana 15 andro be izao. Mila fiaramanidina vaovao i Madagasikara mba hialana amin’ireo olana maro tahaka ny fahasimbana matetika sy ny fahatarana izay miteraka fatiantoka be ho an’ny kaompania. Rehefa misy tranga sahala amin’ireny mantsy dia tsy maintsy ampiantranoina sy omena sakafo hatrany ireo mpandeha izay mahatonga fatiantoka tsy hita noanoa hatrany ary izany olana izany no tokony hialana faran’izay haingana araka ny nambarany. Na izany aza anefa dia tena ilaina fitandremana ny fividianana fiaramanadina satria misy amin’ireny no tsy mety eto Madagasikara mihitsy indrindra ny mankany amin’ny faritany. Misy amin’ireo fiaramanidina eto amintsika izao no vao haingana sy tsara kanefa tsy afaka mandeha Toamasina, Sambava sy Diego kanefa raha hiala amin’izay fifanarahana izay dia mbola vola be indray koa no aloha. Misy ihany koa ny be masonkarena tahaka ilay fiaramanidina mihinana solika be indrindra ampian’ny hetra TVA ka na dia feno matetika aza ny toerana dia tsy misy tombony. Tsy afaka hifaninana eo amin’ireo kaompania hafa misehatra amin’ny iraisam-pirenena mihitsy ny Airmad raha tsy misy fiaramanidina vaovao kanefa mbola lavitr’ezaka ny fitadiavam-bola ny amin’izany.